Khilaafka wadaadada iyo dawlada Sheekh Shariif
Doorashadii Sh.Shariif loo doortay- in uu noqdo- madaxwaynaha dawlada ku meelgaadhka ah ee Soomaaliya waxa ay soo if bixisay in uu jiro khilaaf u dhaxeeya Islaamiyiinta Soomaalida oo ku saabsan mashruuca siyaasadeed ee wadaadada Soomaalida. Dhamaantood waxa ay isku waafaqsan yihiin in Shareecada Islaamku ay noqoto dastuurka dalka, laakiin halkaas ayay ku eegtahay midnimadoodu. Doorashada Sheekh Shariif iyo mucaaradnimada ay doorashadan mucaaradeen qaar ka mida wadaadadu waxa ay markhaati u tahay in Islaamiyiinta Soomaalida dhexdooda uu jiro kala duwanaansho fikradeed oo ku saabsan qaabka uu rabo in uu wadaadku uga qayb galo siyaasada Soomaalida. Hadaba waa kuwama Islaamiyiinta Soomaalidu? Maxayse rabaan? Muxuuse ku salaysan yahay khilaafkooda siyaasadeed? Fahamka jawaabaha su’aalahan iyo doodooduba waxa ay door ka ciyaari karaan in la fahmo aragtiyaha siyaasadeed ee wadaadada Soomaalida. Qormadana, hadii Ilaahay yidhaahdo, waxa aan isku dayi doonaa in aan ku eegno qaar ka mida su’aalahaas.
Maxkamadihii ka hor Iyo Ka dib
Lixdii bilood ee uu maamulkii Maxkamaduhu ka talinayay Koonfurta Soomaaliya waxa ay ahayd markii ugu horaysay ee quwad Islaamiya oo Soomaaliyi ay maamulaan dhul baaxad wayn oo ka mida dhulalka ay Soomaalidu degto. Maamulkii maxkamaduhu waxa uu isu keenay kooxo iyo afraad uu kala duwan yahay fikirka siyaasadeed ee ay ka aaminsan yihiin Islaamku. Arinka ugu wayn ee isku hayay waxa uu ahaa in ay mabda ahaan ka midaysanayeen rabitaanka dhismaha dawlad Islaamiya oo ku dhaqanta shareecada Iskaamka. Kala duwanaanshaha fikirka siyaasiga ah ee wadaadadii Maxkamaduhuna waxa uu ka mid yahay sababihii ugu waawaynaa ee soo dadajiyay burburkii ku yimid maamulkaas. Hadaba burburkii ku dhacay maamulkii Maxkamadaha iyo kala jabkii ka danbeeyay ee wadaadadii ka qaybgalay Isbahaysigii Asmara waxa uu iftiimiyay in aanu midaysnayn fikirka siyaasadeed ee wadaadada Soomaalidu. Anigoo ka duulaya mawaaqifta siyaaasiga ah ee ay wadaada Soomaalidu iska istaageen dawlada Sh.Shariif, ayaa waxa aan wadaadada Soomaaliyeed u qaybiyay sadex kooxood. Waxa aan u bixiyay: Waaqiciyiin, Kaligay iyo Daawadayaal. Hoos waxa aan ku sharixi doonaa mid kastaba waxa aan ula jeedo.
Qoladani waxa ay aaminsan yihiin in nidaamka siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed -ee boqolkiiba boqolka Muslim ka ahi- uu noqdo mid ku salaysan Shareecada Islaamka. Aragtidooda, qaabka loo keenayo dawlad Islaam ahi waa talaabo talaabo laga soo bilaabayo dhismaha qofka, qoyska, mujtamaca ka dibna loo imanayo dhismaha iyo hagaajinta maamulka iyo xukumka. Inta ka horaysa waxa ay aaminsan yihiin in si waaqiciya loola fal galo waxna looga badalo nidaamka siyaasadeed ee markaas jira. Waxa ay aaminsanyihiin in waxa ugu muhiimsan ee marxaladan loo baahan yahay uu yahay nidaam iyo kala danbayn. Taas la’aanteed waxay ay ku qanacsan yihiin in aan waligeed laga baxayn fawdada iminka lagu jiro. Sidaa daraadeed kooxdani ma diidana in marxaldan ay wax la wadaagaan kana qayb galaan nidaam siyaasadeed oo aanay 100 % ka helayn waxaa ay iyagu rabaan laakiin waa in uu nidaamkaasi noqdo mid keeni karo kala danbayn iyo nidaam dawladeed. Waqtiga fog kooxdani waxa ay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay ka guurto nidaamka qabaliga ah una guurto nidaam doorasho oo ku dhisan tartan ay dadka Soomaaliyeed xor u yihiin cida ay dooranayaan. Waxa ay ku qanacsan yihiin hadii dadka Soomaaliyeed la siiyo xoriyadaas in aanay waligood dooran doonin cid aaminsan wax ka soo horjeeda diintooda. Sidaa daraadeed kooxdani cabsi kama qabaan in ay ka qayb galaan loolan siyaasadeed. Sidoo kale kooxdani ma aaminsana in qorigu uu xal u yahay khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida ka dhaxeeya. Waa fikirkan fikirka ay xambaarsan yihiin Sheekh Shariif iyo wadaada taageersani. Sidoo kale waa fikirkan fikirka ay iminka ku dhaqmaan inta badan wadaada ku hoos nool maamulada Somaliland iyo Puntland kuwaas oo arkay in marxaladan ay muhiim tahay in la xoojiyo lagana qayb galo maamulada halkaas ka jira.
Qoladani sidoo kale waxa ay aaminsan yihiin in xalka Soomaalidu uu yahay ku dhaqanka Shareecada Islaamka. Waxa ay arkaan in ay khalad tahay in wadaadadu ay wax la wadaagaan dad ay aaminsan yihiin in ay qayb ka ahaayeen burburkii mudooyinkii u danbeeyay ka dhacay Soomaaliya. Qaabka iyo nidaamka siyaasadeed ee dawladnimo ee ay rabaan qoladani ma cada. Doorosho iyo nidaam xisbiyo badan ku dhisan waxa ay u arkaan in uu yahay nidaam gaalo wadato oo mudan in laga hor tago. Dhib uma arkaan in ay qoriga ku keenaan waxa ay rabaan. Dawlada Sh.Shariif waxa ay u arkaan in ay tahay mid ay gaalo wadato oo lagu burburinayo halgankii wadaadaa sidaa daraadeed aad ayay uga soo horjeedaan. Ma ogla in ay wax la wadaagaan Soomaalida kale ee aan wax u arag sida ay iyagu wax u arkaan xitaa hadii ay Soomaalidaasi yihiin wadaado iyaga oo kale ah laakiin ku khilaafsan aragtidoodan. Fikirkoodu waxa uu ku dhisan yahay waxa aan ugu yeedhay “ama aan wada helo ama waxba hagaagi maayaan”. Dhaliinyarada Shabaabka iyo Xisbullahiga dhawaan la abuuray ayaa ugu cad cad kooxdan.
Qoladani ma rabaan in ay garoonka ciyaarta siyaasada yimaadaan. Waxa ay daawanayaan xaga uu ku dhamaado loolanka labada qolo ee aan kor ku soo sheegay. Dhinac ma rabaan in uu burburo nidaam uu madax ka yahay nin Islaami ahi, dhinca kalena ma rabaan in ay ka hor yimaadaan wadaada diidan Shariifka. Waxa ay rabaan in labada dhinac ay wada noolaadaan laakiin taas xalkeedii ma hayaan sidaa darteed afka ayay xidheen. Qoladan hadii Sheekh Shariif iyo fikirkiisu hirgalana ka hor iman maayaan. Hadii dhinaca ka soo horjeedaa uu xoogaystana iyagana ka hor iman maayaan. Sidaa daraadeed qoladani ma laha damac iyo barmaamij Siyaasadeed. Waa daawadayaal la mida mujtamaca intiisa kale.
Tajribo u baahan najixin
Gabagabadii waxa ay ila tahay in tajrbadan Sheekh Shariif ay tahay mid ku cusub mujtamaca Soomaaliyeed. Waa markii ugu horaysay ee qof islaami ahi uu xukunka Soomaalida qabto. Fashilinta maamulkan Sheekha waxa door wayn ka ciyaari kara qolooyinka wadaada ah ee qoriga xambaarsan. Hadii ay dawladan fashiliyaan ururo Islaamiyiin ahi waxa adkaan sida uu wadaadka Soomaaliyeed masraxa siyaasadeed ee Soomaalida mar kale uu dhawaan ugu soo noqon doono. Fursadan ay maanta haystaan wadaada Soomaalidu ma haystaan in badan oo ka mida wadaada caalamka Islaamka ku noolo. Waa fursad u baahan korin oo hadii la najixiyo loo aayi doono. Laba mid ayuun buu ku dhamaan loolankan wadaadada Soomaalidu, in ay wadaadadu qaataan tajribadii Afgaanistaan ee Mujaahidiintii Ruushka lawada dagaalamayay ay markii danbe noqdaan dagaal Ogayaal “WarLords” iyagu is cunaya. Ama waxa ay noqon dad mushtamacooda ka badbaadiya musiibada ku raagatay oo if iyo aakhiroba wanaag lagu xasuusto. Qaacido sharciya ayaa tidhaahda labada daran ta fudud ayaa la qaataa….waa rajadayda in Islaamiyiinta Soomaalida khaastana kuwa hogaanka u haya maantu ay qaacidadaas fahmaan. Waa in dawladan Sheekh Shariif ugu yaraan loo arkaa in labadaa daran ta fududud ay tahay lagana qayb qaataan hir galinteeda iyada oo khilaafka FIKRIGA ah ee wadaadada u dhaxeeya markan dib loo dhigayo. Waa rajadayda in ay sidaas yeeli doonaan.!